Ertraa keessatti walabummaan preesii akkuma uggurameetti kan jiru yoo ta’u gaazexxesoota hedduu hidhuunis biyya beekamtuu ta’u itti fuftee jirti jedha koreen mirga gaazexxesootaaf falmu CPJ.Gazexxesoonni Ertraa keessatti hidhaman amma iyyu haala Rakkisaa keessa akka jiran ibsamee jira.
Biyyoota Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessaa Gazexxesoota hedduu hidhuun Ertraan beekamti jedha gareen kun.Ertraan waggaa waggaan walabummaa presii kan ilaaleen daran gad bu’aa deemti.Baatii Fulbaana 2001 angawoonni Ertraa preesii dhunfaa hedduu cufan.Tarkaanfii Kanaan gaazexaaleen 7 cufamanii gaazexxessonni hedduun hidhaman.
Gazeexxessonni hangi tokko haga har’attu hidhaa keessa jiru.Mootummaan Ertraa akka jedhutti kanneen hidhaman kun Gaazexxesoota miti. Qaama mormitootaa keessaa hanga tokko ykn qaama humna alaa kanneen paartii mootummaa kan aangoo of-harkaa qabu tuffatan ittiin jedha.
Televiziyoona Ertraaf hojjataa kan turee fi amma London keessa kan jiru Tamasge Debesaay akka jedhutti Ertraa keessatti waa’ee Gazexxesoota hidhamanii gabaasuun hin danda’amu.
Kana malees haga har’atti kanneen hidhaman eessa akka jiran hin beekamu.Lubbuun jiru fi du’aniiruu yoo ta’ees hin beekamu jedha.